Bit By Bit - Mifehy - 6.7.3 Eritrereto ny fikarohana fitsipika ho toy mitohy, tsy discrete
Adihevitra momba ny fitsipi-pitondrantena ara-tsosialy fikarohana ao amin'ny taona nomerika matetika mitranga amin'ny teny mimari-droa; ohatra, areti-mifindra-pihetseham-po dia na etika, na dia tsy etika. Mimari-droa io fomba fisainana polarizes fifanakalozan-kevitra, misakana ny ezaka ataonareo mba hananana nizara fenitra, mampiroborobo-tsaina ny hakamoana, ary absolves mpikaroka fikarohana izay no misy soratra hoe "etika" avy ny andraikitra hanao zavatra bebe kokoa-pahamendrehana. Ny tena mamokatra resaka izay hitako fikarohana momba ny fitsipi-pitondrantena mifindra any an-dafin'ny mimari-droa io fomba fisainany ny hevitra mitohy momba ny fikarohana ny fitsipi-pitondrantena.
Ny olana lehibe iray amin'ny fampiroboroboana ny etika fikarohana dia ny fampivelarana ny fifanakalozan-kevitra. Ny fiantsoana ny fifanoherana ara-pihetseham-po "tsy mendrika" dia manompa azy miaraka amin'ireo habibiana mahatsiravina amin'ny fomba izay tsy manampy. Fa manampy sy mahasoa kokoa ny miresaka manokana momba ny endrik'ilay fianarana izay hitanao fa olana. Ny fialana amin'ny fomba fisainana sy ny fiteny polarizing dia tsy miantso antsika hampiasa fiteny tsy misy dikany mba hanafenana ny fitondran-tena tsy mendrika. Fa kosa, ny hevitra etsy ambony dia heveriko, hitondra ho amin'ny fiteny sy tsara kokoa. Ankoatra izany, ny fombafomba fikarohana etika momba ny fikarohana dia manazava fa ny tsirairay-na mpikaroka izay manao asa izay efa noheverina ho "etika" aza-dia tokony hiezaka hamolavola ny fifandanjana ara-moraly tsaratsara kokoa amin'ny asany.
Ny tombony farany amin'ny fihetsika manoloana ny fieritreretana tsy tapaka dia ny famporisihana ny fanetren-tena ara-tsaina, izay mety amin'ny fiatrehana ireo fanamby ara-ethika. Ny fanontaniana momba ny fitsipi-pikarohana fikarohana amin'ny vanim-potoana nomerika dia sarotra, ary tsy misy olona iray tokony hatoky tena loatra amin'ny fahaizany manavaka ny lalana marina.